नदी रुन्छे, रुख जंगल रुन्छ
एयरपोर्ट बनाउने नाममा, उद्योग खोल्ने नाममा, राजनीतिक भोट बैंक तैयार गर्ने नाममा जंगल फडानी तीब्र रुपमा भइरहेको छ । यसरी रुखहरु काट्दा रुख पनि रुन्छ होला । पर्यावरणको बिनासलीला जारी छ । हामीले फेर्ने अक्शिजनसमेत रुख काटिदा न्यूनिकरण हुन्छ भन्ने भुलिरहेका छौं ।
निर्माण सामग्रीका रुपमा ढुंगा, माटो, बालुवा झिक्ने नदीबाटै हौ । आधुनिक मेसिनको प्रयो गरेर नदी दोहन भइरहेकै छ । यसरी प्रकृतिमाथि अन्याय गरेर मानिसहरु धन कमाइरहेका छन् । विश्वमा वातावरण बिग्रदै गएको र मौसम परिवर्तनका कारणले अनेक समस्याहरु थपिएकोमा चिन्ता प्रकट गरिदैछ, नेपालमा वातावरण बिगार्ने र बिपत्ति निम्त्याउने काम भइरहेको छ । बाढीपहिरो, धुलो धुवाँ सबैको कारण प्रकृतिमाथिको अन्यायका कारण हो । नदी सभ्यता सकिदैछ, नदी पनि रुन्छे होला, हेर्ने कसले ?
नियम छ, कानुन छ । नदी दोहन गर्न पाइन्न भन्ने कडा निर्देशन पनि छ र एक रुख काटे २५ रुख रोप्ने व्यवस्था पनि छ । यो व्यवस्था मान्ने कसले ? जता पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाब, कानुनले त कामै गर्दैन । जब कानुनले काम गर्न छाड्छ, अराजकता बढ्छ । यतिबेला नेपालमा नदी र जंगल फडानीबारे कहालीलाग्दो अराजकता बढेको छ । हामी आप्mनै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरिरहेका छौं र व्यापक विपत्ति निम्त्याइरहेका पनि छौं ।
चुरे दोहन पनि जारी छ, मरुभूमि बन्दैछ चुरे क्षेत्र । अन्य नदी किनार, नदी, र जंगली भूभाग पनि अतिक्रमण भइरहेको छ । यता चिन्ता नगर्ने ?